Ndifumana impazamo "Kwimemori" xa kulungiswa i-PST /OST ifayile. Kwenziwe ntoni? - DataNumen
Impazamo ithetha ukuba i-PST yakhoOST Ifayile inkulu kakhulu kwaye indawo yememori kwinkqubo yakho ayinelanga ukuyifumana kwakhona. Ngokubanzi, le mpazamo yenzeka kwiikhompyuter ezisezantsi, kunye ne-PST /OST Ifayile inkulu kune-50GB.
Nazi ezinye zezisombululo zempazamo ethi "Ngaphandle kwememori":
Faka imveliso yethu kwenye ikhompyuter ngolungelelwaniso olungcono lwezixhobo ze uzame kwakhona. Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ikhompyuter ye-64bit enememori engaphezulu kwe-64GB kunye ne-64bit Outlook efakiweyo yokwenza umsebenzi. Kwi-64bit Outlook, ungasebenzisa i-64bit DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery eya kuthi isebenzise ngokupheleleyo inkumbulo kwinkqubo yakho.
Qinisekisa ukuba kukho izithuba ezaneleyo zediski kwi-C yakho: ukuqhuba. IiWindows ziya kusebenzisa izithuba zediski kwi-C: ukuqhuba njengememori ebonakalayo. Ukuba akukho zithuba zediski zasimahla ezaneleyo kwi-C: ukuqhuba, uya kudibana nengxaki enjalo. Kuyacetyiswa ukugcina ubuncinci i-100GB yezithuba zediski yasimahla kwi-C yakho.
Okanye ungasebenzisa DataNumen File Splitter ukwahlulahlula i-PST /OST ifayile ibe ngamaqhekeza aliqela, inye malunga nobukhulu be-10GB. Emva koko baleka DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery ukulungisa ezi PST /OST iifayile nganye nganye okanye kwibhetshi ngokusebenzisa umsebenzi "woLungiso lweBatch". Nangona kunjalo, ngesi sisombululo, ungaphulukana nedatha xa uhlula i-PST /OST ifayile kunye nezinye ii-imeyile zikumda wefayile, kodwa ungathintela "Ukuphuma kwimemori" Impazamo eyenzekayo kunye nokufumana kwakhona most yedatha.
64bit, DataNumen File Splitter, izithuba zasimahla, Ngapha kokungagcinwanga, bahlukana